တောင်ပင်လယ်ပုလဲ အင်ဒိုနီးရှား - Gold South Sea Pearl Wholesale | Sea Pearl Dealer From Indonesia Pearl Farm | Tahitian Sea Pearl Wholesale | Moti Wholesale
Home / harga perhiasan mutiara lombok / တောင်ပင်လယ်ပုလဲ အင်ဒိုနီးရှား
Posted on 6th January 2022 16th January 2022 by abdurrachim
အင်ဒိုနီးရှားသည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့် ရေကြောင်းထွက်ကုန်များ ပေါများသော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကျွန်းစုဖြစ်သည်။ ထိုထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုမှာ တောင်ပင်လယ်ပုလဲဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးပုလဲအမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုဟု ဆိုနိုင်သည်။ ကြွယ်ဝသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝရုံသာမက အင်ဒိုနီးရှားတွင် လက်မှုပညာ ကျွမ်းကျင်မှု မြင့်မားသော လက်မှုပညာများ ကြွယ်ဝစွာ ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား နောက်ထပ်ထူးခြားသော အင်ဒိုနီးရှားထုတ်ကုန်ဖြစ်သော တောင်ပင်လယ်ပုလဲကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာနှစ်ခုနှင့် တိုက်ကြီးနှစ်ခု၏ လမ်းဆုံတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားယဉ်ကျေးမှုသည် ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် နိုင်ငံခြားလွှမ်းမိုးမှု အများအပြားကြား ကာလကြာရှည်စွာ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြင့် ပုံဖော်ထားသည့် ထူးခြားသော ရောနှောမှုကို ပြသနေသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ကြွယ်ဝသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များသည် ပုလဲရတနာများကို လက်မှုပညာမျိုးစုံဖြင့် ကမ္ဘာကို ပေးဆောင်သည်။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် အင်ဒိုနီးရှားသည် သြစတြေးလျ၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့ ပုလဲများကို ဖန်တီးထုတ်လုပ် တင်ပို့လျက်ရှိသည်။ စာရင်းဇယားများအရ ပုလဲတင်ပို့မှုတန်ဖိုးသည် ၂၀၀၈-၂၀၁၂ ကာလအတွင်း တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၁၉ ဒသမ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ် ပထမငါးလတွင် ပို့ကုန်တန်ဖိုး US$ 9.30 သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ သန်း။
အရည်အသွေးမြင့်ပုလဲသည် အခြားကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်အညီ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အဖိုးတန်သော အလှတရားများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ နည်းပညာအရ ပုလဲတစ်လုံးကို သက်ရှိအခွံနွှာသောအခွံအတွင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးများ သို့မဟုတ် အင်္ကျီအဝတ်အတွင်းမှ ထုတ်လုပ်သည်။
ပုလဲကို ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ငြိမ်သက်နေသော အခွံကို စုစည်းထားသည့် အလွှာများကဲ့သို့ မိနစ်ပုံဆောင်ခဲပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ စံပြပုလဲသည် လုံးဝဝိုင်းပြီး ချောမွေ့သော်လည်း Baroque ပုလဲဟုခေါ်သော အခြားသစ်တော်သီးပုံသဏ္ဍာန်များစွာ ရှိပါသည်။
ပုလဲများကို ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်ဖြင့် အဓိကပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ရှာလကာရည်တွင် ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ Calcium carbonate သည် ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်၏ ပုံဆောင်ခဲများသည် ကယ်လ်စီယမ်အက်ဆစ်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်သည် အားနည်းသော အက်ဆစ်ဖြေရှင်းချက်ပင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
တောရိုင်းများတွင် အလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်သော သဘာဝပုလဲများသည် တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်သော်လည်း တစ်ချိန်တည်းတွင် အလွန်ရှားပါးသည်။ စျေးကွက်တွင် လက်ရှိရရှိနိုင်သော ပုလဲများကို အများအားဖြင့် ပုလဲကမာနှင့် ရေချိုဂုံးများမှ မွေးမြူကြသည်။
အတုအပပုလဲများကို သဘာဝပစ္စည်းထက် အရည်အသွေးများစွာနိမ့်ကျသော်လည်း ဈေးမကြီးသော လက်ဝတ်ရတနာအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ပုလဲတုများတွင် ရောင်ရမ်းမှု ညံ့ဖျင်းပြီး သဘာဝနှင့် အလွယ်တကူ ခွဲခြားနိုင်သည်။
သဘာဝနှင့် စိုက်ပျိုးထားသော ပုလဲများ၏ အရည်အသွေးသည် ၎င်းတို့ကို ထုတ်လုပ်သည့် အခွံ၏ အတွင်းပိုင်းကဲ့သို့ ၎င်း၏ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပြွန်တောက်နေသည့် အပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ပုလဲများကို လက်ဝတ်ရတနာများပြုလုပ်ရန် အများစုကို စိုက်ပျိုးပြီး ရိတ်သိမ်းထားသော်လည်း ၎င်းတို့ကို ခမ်းနားထည်ဝါသော အဝတ်အစားများပေါ်တွင် ချုပ်လုပ်ထားပြီး အလှကုန်၊ ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးအရောအနှောများတွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်။
ပုလဲများကို ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်အခြေခံ၍ အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်- သဘာဝ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အတုအယောင်။ သဘာဝပုလဲများ မကုန်ခမ်းမီ လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်တစ်ခုခန့်က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ပုလဲများအားလုံးသည် သဘာဝပုလဲများဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် သဘာဝပုလဲများသည် အလွန်ရှားပါးပြီး နယူးယောက်၊ လန်ဒန်နှင့် အခြားနိုင်ငံတကာနေရာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် လေလံပွဲများတွင် ရောင်းချလေ့ရှိသည်။ သဘာဝပုလဲများသည် လူတို့၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ မတော်တဆဖြစ်ပေါ်လာသော ပုလဲအမျိုးအစားအားလုံးကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။
၎င်းတို့သည် ပေါက်နေသော ကပ်ပါးကဲ့သို့သော ယားယံသည့် အစတစ်ခုဖြင့် အခွင့်အလမ်း၏ ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ကမာကောင်သည် ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်မှ မနှင်ထုတ်နိုင်သော ပြင်ပပစ္စည်းများကို မလိုလားအပ်သော ဝင်ရောက်မှုပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့် ဤသဘာဝဖြစ်ပျက်နိုင်ခြေသည် အလွန်နည်းပါးပါသည်။
မွေးမြူထားသောပုလဲသည် တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝပုလဲမျိုးတွင်၊ ကမာကောင်သည် တစ်ယောက်တည်းလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း မွေးမြူထားသောပုလဲများသည် လူသားတို့၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ကမာကောင်ကို ပုလဲထုတ်လုပ်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးရန်အတွက် ပညာရှင်တစ်ဦးသည် ကမာကောင်အတွင်းတွင် ယားယံမှုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ စိုက်သွင်းသည်။ ခွဲစိတ်ထည့်သွင်းထားသော ပစ္စည်းမှာ Mother of Pearl ဟုခေါ်သော အခွံအပိုင်းအစဖြစ်သည်။
ဤနည်းပညာကို သြစတြေးလျရှိ ဗြိတိသျှဇီဝဗေဒပညာရှင် William Saville-Kent မှတီထွင်ခဲ့ပြီး Tokichi Nishikawa နှင့် Tatsuhei Mise တို့မှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Nishikawa သည် 1916 ခုနှစ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး Mikimoto Kokichi ၏သမီးနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Mikimoto သည် Nishikawa ၏နည်းပညာကိုသုံးနိုင်ခဲ့သည်။ 1916 ခုနှစ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုပြီးနောက်၊ အဆိုပါနည်းပညာကို 1916 ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Akoya ပုလဲမုတ်ကောင်များတွင် စီးပွားဖြစ်အသုံးချခဲ့ပါသည်။ Mise ၏အစ်ကိုသည် Akoya ကမာတွင် စီးပွားဖြစ်ပုလဲသီးနှံကို ပထမဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်သည်။
Mitsubishi ၏ Baron Iwasaki သည် အဆိုပါနည်းပညာကို ဖိလစ်ပိုင်တွင် 1917 ခုနှစ်တွင် South Sea ပုလဲမုတ်ကောင်များတွင် ချက်ချင်းအသုံးချခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Buton နှင့် Palau တို့တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Mitsubishi သည် မွေးမြူထားသော တောင်ပင်လယ်ပုလဲကို ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည် – 1928 ခုနှစ်အထိ ပထမဆုံးသော စီးပွားဖြစ်ပုလဲအသေးစားကို အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အတုအပပုလဲများသည် ကွဲပြားသော ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင် ငါးအကြေးခွံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဖန်ပုတီးစေ့ကို ဖန်ခွက်တစ်ခုထဲသို့ နှစ်မြှုပ်ထားသည်။ ဤအလွှာသည် ပါးလွှာပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပျက်သွားနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် အတုအယောင်ကို ကိုက်ပြီး ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပုလဲအတုများသည် သင့်သွားများတစ်လျှောက် ပျံသွားကာ ပုလဲအစစ်ပေါ်ရှိ နာကရီအလွှာများသည် ကြမ်းတမ်းသည်ဟု ခံစားရသည်။ စပိန်နိုင်ငံရှိ Mallorca ကျွန်းသည် ၎င်း၏ပုလဲလုပ်ငန်းအတွက် လူသိများသည်။
ပုလဲ၏ အခြေခံပုံသဏ္ဍာန် ရှစ်မျိုး ရှိသည်- အဝိုင်း၊ တစ်ပိုင်း၊ အဝိုင်း၊ ခလုတ်၊ တစ်စက်၊ သစ်တော်သီး၊ ဘဲဥပုံ၊ ခန့်ညားထည်ဝါသော၊ နှင့် စက်ဝိုင်း။
လုံးဝန်းသောပုလဲများသည် အရှားပါးဆုံးနှင့် တန်ဖိုးအရှိဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။
ပုလဲ၏ပုံသဏ္ဍာန်သည် လုံးဝန်းသောပုလဲကဲ့သို့ ရုပ်ဖျက်နိုင်သော လည်ဆွဲများတွင် သို့မဟုတ် အပိုင်းပိုင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
ကြယ်သီးပုလဲများသည် အနည်းငယ်ပြားသွားသော အဝိုင်းပုလဲနှင့်တူပြီး လည်ဆွဲကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ပုလဲ၏နောက်ဘက်တစ်ဝက်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် ပုလဲတစ်လုံးတည်းဖြင့် လည်ဆွဲများတွင် ပို၍အသုံးများသောကြောင့် ၎င်းကို ပိုကြီးပြီး အဝိုင်းပုလဲသဖွယ်ဖြစ်လာသည်။
ရေစက်နှင့် သစ်တော်သီးပုံစံပုလဲများကို တစ်ခါတစ်ရံ မျက်ရည်ပုလဲများအဖြစ် ရည်ညွှန်းပြီး နားကပ်၊ ဆွဲသီး သို့မဟုတ် လည်ဆွဲတွင် ဗဟိုပုလဲအဖြစ် အများဆုံးတွေ့ရတတ်သည်။
ခန့်ညားထည်ဝါသောပုလဲများသည် ကွဲပြားခြားနားသောဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ သူတို့ဟာ ထူးခြားပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ အလွန်အမင်း ပုံမမှန်လေ့ရှိပါတယ်။ လည်ဆွဲတွေမှာလည်း တွေ့ရများပါတယ်။
အဝိုင်းပတ်ထားသော ပုလဲများကို ပုလဲ၏ကိုယ်ထည်တစ်ဝိုက်တွင် ဗဟိုပြုသော အခေါင်များ သို့မဟုတ် အကွင်းများဖြင့် ထင်ရှားစေသည်။
Harmonized System (HS) အရ ပုလဲများကို သဘာဝပုလဲအတွက် 7101100000၊ 7101210000 ပုလဲ၊ အလုပ်မလုပ်ရသေးသော ပုလဲများအတွက် 7101220000 တို့ကို အမျိုးအစားခွဲခွဲခြားထားပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ ပုလဲရဲ့ တောက်ပမှု
ရာစုနှစ်များစွာကတည်းက သဘာဝတောင်ပင်လယ်ပုလဲကို ပုလဲအားလုံး၏ဆုအဖြစ် မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ တောင်ပင်လယ်ပုလဲပုလဲခင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင် မြောက်သြစတေးလျကဲ့သို့သော ဗစ်တိုးရီးယားခေတ်ဥရောပရှိ ပုလဲများ၏ အနှစ်သက်ဆုံးခေတ်တွင် အဆုံးစွန်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဤပုလဲအမျိုးအစားသည် ၎င်း၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ထူထဲသော သဘာဝနကရီဖြင့် အခြားပုလဲများအားလုံးနှင့် ကွဲပြားသည်။ အခြားပုလဲများကဲ့သို့ “တောက်ပြောင်ခြင်း” ကို ပေးဆောင်ရုံသာ မဟုတ်ဘဲ ကွဲပြားသော အလင်းအခြေအနေများအောက်တွင် စိတ်ခံစားချက်ကို ပြောင်းလဲပေးသည့် နူးညံ့ပြီး မမြင်နိုင်သော အသွင်အပြင်သည် ဤသဘာဝအလျောက် မညီမျှသော တောက်ပမှုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ တောင်ပင်လယ်ပုလဲကို ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက် ကျွမ်းကျင်သော ကျောက်မျက်ရတနာသမားများအား နှစ်သက်သဘောကျစေသည့် ဤ nacre ၏အလှတရား။
Silver-Lipped သို့မဟုတ် Gold-Lipped oyster ဟုလည်းလူသိများသော Pinctada maxima မှ အကြီးဆုံးပုလဲမွေးကမာများမှ သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်သည်။ ဤငွေရောင် သို့မဟုတ် ရွှေနှုတ်ခမ်းနီခရုခွံများသည် ညစာပန်းကန်လုံးအရွယ်အထိ ကြီးထွားနိုင်သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအပေါ် အလွန်အမင်း အာရုံခံစားနိုင်သည်။
ဤအာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် တောင်ပင်လယ်ပုလဲများ၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရှားပါးမှုကို တိုးစေသည်။ ထို့ကြောင့် Pinctada maxima သည် ပျမ်းမျှအရွယ်အစား 12 မီလီမီတာဝန်းကျင်ရှိသည့် ပုလဲအရွယ်အစား9မီလီမီတာမှ 20 မီလီမီတာအထိ ပိုကြီးသောပုလဲများကို ထုတ်လုပ်သည်။ nacre အထူကြောင့်ဖြစ်သော South Sea ပုလဲသည် ထူးခြားပြီး နှစ်လိုဖွယ်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကြောင့် ကျော်ကြားသည်။
ထိုသီလများပေါ်တွင် တောင်ပင်လယ်ပုလဲတွင် ခရင်မ်မှ အဝါရောင်မှ ရွှေနက်အထိနှင့် အဖြူရောင်မှ ငွေရောင်အထိ အရောင်များ ခင်းကျင်းထားသည်။ ပုလဲများသည် ပန်းရောင်၊ အပြာ သို့မဟုတ် အစိမ်းကဲ့သို့ မတူညီသောအရောင်တစ်ခု၏ ချစ်စရာကောင်းသော “လွန်ကဲသောအသံ” ကို ပြသနိုင်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အခြားသော သဘာဝပုလဲများကဲ့သို့ပင်၊ သဘာဝတောင်ပင်လယ်ပုလဲသည် ကမ္ဘာ့ပုလဲဈေးကွက်မှ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့ရရှိနိုင်သော တောင်ပင်လယ်ပုလဲအများစုသည် တောင်ပင်လယ်ရှိ ပုလဲမွေးမြူရေးခြံများတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။
ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့် အင်ဒိုနီးရှားသည် တောက်ပမှု၊ အရောင်၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးတို့၌ ၎င်းတို့၏အလှကို အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ Imperial Gold ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအရောင်ရှိသော ပုလဲများကို အင်ဒိုနီးရှားရေပြင်တွင် မွေးမြူထားသော ကမာကောင်များမှသာလျှင် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ တောက်ပမှုအရ၊ သဘာဝနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ တောင်ပင်လယ်ပုလဲများသည် အလွန်ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။
၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော သဘာဝတောက်ပမှုကြောင့် ၎င်းတို့သည် အခြားပုလဲများ၏ မျက်နှာပြင်ထက် သိသိသာသာ တောက်ပြောင်သည့် အတွင်းသားတောက်ပမှုကို ပြသသည်။ ဖယောင်းတိုင်၏ တောက်ပသောအလင်းရောင်ကို ချောင်းအလင်းရောင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဟု တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖော်ပြသည်။
ရံဖန်ရံခါတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးရှိသော ပုလဲများသည် Orient ဟုခေါ်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ပြသလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် အရောင်၏ သိမ်မွေ့သော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်အတူ ကြည်လင်တောက်ပသော တောက်ပမှု၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ တောင်ပင်လယ်ပုလဲများ၏ အတောက်ပဆုံးအရောင်များမှာ အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး အရောင်အသွေး အမျိုးမျိုးဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။
Overtones များသည် သက်တံ၏ မည်သည့်အရောင်မဆို ဖြစ်နိုင်ပြီး South Sea ပုလဲမုတ်ကောင်၏ သဘာဝအရောင်များမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည်လင်တောက်ပသော တောက်ပသော အရောင်အသွေးနှင့် ပေါင်းစပ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် “အရှေ့တိုင်း” ဟုခေါ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖန်တီးသည်။ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အရောင်တွေကတော့ ငွေရောင်၊ ပန်းရောင်အဖြူ၊ နှင်းဆီဖြူ၊ ရွှေဖြူ၊ ရွှေခရင်မ်၊ ရှန်ပိန်နဲ့ Imperial Gold တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
အင်ပါယာရွှေရောင်သည် အားလုံးထဲတွင် အရှားပါးဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအရောင်ကို အင်ဒိုနီးရှားရေပြင်တွင် မွေးမြူထားသော ကမာကောင်များမှသာလျှင် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ South Sea မွေးမြူထားသောပုလဲများသည် အရွယ်အစားပိုကြီးပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၀ မီလီမီတာနှင့် ၁၅ မီလီမီတာကြားရှိသည်။
ပိုကြီးသောအရွယ်အစားများကိုတွေ့ရှိသောအခါ 16 မီလီမီတာနှင့်အထက် ရှားပါးသောပုလဲများနှင့် ရံဖန်ရံခါ 20 မီလီမီတာထက်ပိုသောပုလဲများကို စူးစမ်းလေ့လာသူများသည် အလွန်တန်ဖိုးကြီးပါသည်။ အလှတရားသည် ကြည့်ရှုသူ၏မျက်လုံးထဲတွင် ရှိနေပါက၊ ပုလဲနှစ်လုံးသည် အတိအကျတူညီခြင်းမရှိသောကြောင့် တောင်ပင်လယ်ပုလဲများသည် အလှတရားများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ နက္ခတ်အထူကြောင့် တောင်ပင်လယ်တွင် မွေးမြူထားသော ပုလဲများကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။
Pearl nacre သည် ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်ပုံဆောင်ခဲများနှင့် ကမာကောင်မှထုတ်လုပ်သော အထူးဒြပ်ပစ္စည်းများ၏ လှပသော matrix တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤမက်ထရစ်ကို အလွှာပေါ်တွင် အလွှာလိုက်၍ စုံလင်စွာဖွဲ့စည်းထားသော အဏုကြည့်မှန်ချပ်များဖြင့် ချထားသည်။ ပုလဲ၏အထူကို အလွှာအရေအတွက်၊ အလွှာတစ်ခုစီ၏ အထူဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
ကြွေပြားများခင်းထားသော ပြီးပြည့်စုံမှု၊ တိကျမှုနှင့် ကြွေပြားအလွှာအရေအတွက်အားဖြင့် ကယ်လ်စီယမ်ပုံဆောင်ခဲများသည် “ပြား” သို့မဟုတ် “ပရစ်စမာ” ရှိမရှိ၊ nacre ၏အသွင်အပြင်ကို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ သက်ရောက်မှု
ပုလဲ၏ အလှသည် ဤစုံလင်မှု၏ မြင်နိုင်စွမ်းအပေါ် မူတည်သည်။ ပုလဲ၏ ဤမျက်နှာပြင် အရည်အသွေးကို ပုလဲ၏ အသားအရေအဖြစ် ဖော်ပြသည်။
ပုံသဏ္ဍာန်သည် ပုလဲတစ်လုံး၏ အရည်အသွေးကို မထိခိုက်စေသော်လည်း သီးခြားပုံသဏ္ဍာန်များ၏ လိုအပ်ချက်သည် တန်ဖိုးအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဆင်ပြေစေရန်အတွက်၊ South Sea မွေးမြူထားသောပုလဲများကို ဤပုံစံခုနစ်မျိုးဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ အမျိုးအစားများစွာကို အမျိုးအစားခွဲများစွာဖြင့် ထပ်မံခွဲခြားထားပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားသည် အကြီးဆုံးသော ကမာမျိုးစိတ်ဖြစ်သည့် Pinctada maxima မှ စိုက်ပျိုးထားသည့် တောင်ပင်လယ်ပုလဲများကို ထုတ်လုပ်သည်။ သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသော ကျွန်းစုတစ်ခုအနေဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားသည် အရည်အသွေးမြင့်ပုလဲများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Pinctada maxima အတွက် အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ Pinctada maxima သည် အရောင်အဆင်း တစ်ဒါဇင်ကျော်ရှိသော ပုလဲများကို ထုတ်လုပ်သည်။
အရှားပါးဆုံးနှင့် တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပုလဲများမှာ ရွှေရောင်နှင့် ငွေရောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ Imperial Gold Pearl သည် ပုလဲအားလုံး၏ အခမ်းနားဆုံးသော ပုလဲများအဖြစ် ငွေရောင်၊ ရှန်ပိန်၊ တောက်ပသော အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်နှင့် ရွှေရောင်များ အပါအဝင် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အရိပ်အမျိုးမျိုး၊
အင်ဒိုနီးရှားရေပြင်တွင် မွေးမြူထားသော ကမာကောင်များမှ ထုတ်လုပ်သော Imperial Gold Pearl သည် အမှန်တကယ်တွင် တောင်ပင်လယ်ပုလဲဘုရင်မဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားရေသည် တောင်ပင်လယ်ပုလဲအတွက် မွေးရာပါဖြစ်သော်လည်း ပုလဲ၏အရည်အသွေးနှင့် ဈေးနှုန်းကိုသေချာစေရန်အတွက် ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုနှင့် တင်ပို့မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် စည်းမျဉ်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပါတီတွေရှိတယ်။
စိန်ခေါ်မှုကိုဖြေရှင်းရန် ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ရေချိုဂုံးများမှ မွေးမြူပြီး အဆင့်နိမ့်သည်ဟု သံသယရှိသော တရုတ်ပုလဲပုလဲများကို အစိုးရက ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ရေကြောင်းရေးရာ ဝန်ကြီးအဆင့် စည်းမျဉ်းအမှတ် ၈/၂၀၀၃ ထုတ်ပြန်ကာ ပုလဲအရည်အသွေး ထိန်းချုပ်ရေး ကဲ့သို့သော ကြိုတင်သတိထားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အရည်အသွေးနိမ့်သော်လည်း အင်ဒိုနီးရှားပုလဲများနှင့် အလွန်ဆင်တူသည့် တရုတ်ပုလဲများကဲ့သို့ တိုင်းတာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘာလီနှင့် Lombok ရှိ အင်ဒိုနီးရှားပုလဲထုတ်လုပ်မှုစင်တာများအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာနိုင်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားပုလဲတင်ပို့မှုသည် ပျမ်းမျှနှစ်စဉ် 19.69% ဖြင့် 2008-2012 ကာလတွင် သိသာထင်ရှားစွာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပို့ကုန်အများစုကို သဘာဝပုလဲက ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ၂၂ ဖြင့် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ မွေးမြူထားသောပုလဲများ အလုပ်မလုပ်ဘဲ 31.82% ဖြင့် ဒုတိယတွင် လိုက်၍ မွေးမြူထားသောပုလဲများ 16.97% ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားမှ ပုလဲတင်ပို့မှုတန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဒသမ ၂၉ သန်းသာ ရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ ဒသမ ၃၃ သန်းအထိ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ပုံ ၁။ အင်ဒိုနီးရှားပုလဲတင်ပို့မှု (၂၀၀၈-၂၀၁၂)
2010 နှင့် 2011 ခုနှစ်တွင် US$ 31.43 million နှင့် US$ 31.79 million သို့ အသီးသီး တိုးမြင့်လာခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ပို့ကုန်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉.၄၃ သန်းသို့ လျှော့ချခဲ့သည်။
ပို့ကုန်ဒေါ်လာ ၉ ဒသမ ၃၀ သန်းဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ပထမငါးလတွင် အလုံးစုံ ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် အလားတူကာလက ကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဒသမ ၃၄ သန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၄ ဒသမ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့သည်။
ပုံ ၂။ အင်ဒိုနီးရှား တင်ပို့သည့်နေရာ (၂၀၀၈-၂၀၁၂)
2012 ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားပုလဲများအတွက် အဓိကတင်ပို့သည့်နေရာများမှာ ဟောင်ကောင်၊ သြစတြေးလျနှင့် ဂျပန်တို့ဖြစ်သည်။ ဟောင်ကောင်သို့ တင်ပို့မှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃ ဒသမ ၉၀ သန်း သို့မဟုတ် အင်ဒိုနီးရှားပုလဲတင်ပို့မှု စုစုပေါင်း၏ ၄၇ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ဒသမ ၃၀ သန်း (၃၁ ဒသမ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြင့် ဒုတိယအကြီးဆုံး ပို့ကုန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျက ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၉၉ သန်း (၂၀ ဒသမ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်း)၊ တောင်ကိုရီးယားက ကန်ဒေါ်လာ ၁၀၅,၀၀၀ (၀.၃၆ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ထိုင်းက ကန်ဒေါ်လာ ၃၆,၀၀၀ (၀.၁၂ ရာခိုင်နှုန်း) တို့ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ပထမငါးလတွင် ဟောင်ကောင်သည် ပုလဲတင်ပို့မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၁၁ သန်း သို့မဟုတ် ၄၄ ဒသမ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ သြစတြေးလျက ဒုတိယနေရာမှာ ဂျပန်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၅၁ သန်း (၂၇.၀၄%)၊ ဂျပန်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၃၆ သန်း (၂၅.၄၇%)၊ တတိယနေရာမှာ ထိုင်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၄၀၀၀ (၂.၉၄%)၊ တောင်ကိုရီးယားက ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀ (၀.၂၇%) နဲ့ တတိယနေရာမှာ ရှိပါတယ်။
ဟောင်ကောင်သည် 2008-2012 ကာလတွင် 124.33% သာလွန်ထူးခြားသော နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုကို ပြသခဲ့သော်လည်း 2013 ခုနှစ် ပထမငါးလတွင် 39.59% ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး 2012 ခုနှစ် အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 35.69 ကျဆင်းသွားပါသည်။ %
ပုံ ၃။ ပြည်နယ်အလိုက် အင်ဒိုနီးရှား တင်ပို့မှု (၂၀၀၈-၂၀၁၂)
အင်ဒိုနီးရှားပုလဲတင်ပို့မှုအများစုသည် ဘာလီ၊ ဂျာကာတာ၊ South Sulawesi နှင့် West Nusa Tenggara ပြည်နယ်များမှဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ မှ ၂၂ သန်းအထိ တန်ဖိုးရှိသည်။
ပုံ 4။ ပုလဲ၊ နတ် သို့မဟုတ် ကိုးကွယ်မှု စသည်တို့ကို နိုင်ငံအလိုက် ကမ္ဘာသို့ တင်ပို့ခြင်း (2012)
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ပုလဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄၇ ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅၇ ဘီလီယံ တင်ပို့မှုထက် ၆ ဒသမ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းခဲ့သည်။ 2008-2012 ကာလတွင်၊ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအားဖြင့် 1.72% ကျုံ့သွားခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ပုလဲတင်ပို့မှုသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၇၅ ဘီလီယံအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး နောက်နှစ်များတွင် ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ 2009 ခုနှစ်တွင် ပို့ကုန် US$ 1.39 billion သို့ လျှော့ချခဲ့ပြီး 2010 နှင့် 2011 ခုနှစ်တွင် US$ 1.42 billion နှင့် US$ 157 billion သို့ အသီးသီး ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။
ဟောင်ကောင်သည် စျေးကွက်ဝေစု ၂၇.၇၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် 2012 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ 408.36 သန်းဖြင့် ထိပ်တန်းတင်ပို့ခဲ့သည်။ စျေးကွက်ဝေစု၏ 19.28% ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက ပို့ကုန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 283.97 သန်းဖြင့် ဒုတိယ၊ ဂျပန်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ 210.50 သန်း (14.29%)၊ သြစတြေးလျမှ ပို့ကုန် US$ 173.54 သန်း (11.785) နှင့် French Polynesia မှ US$ 76.18 သန်း (တင်ပို့ခဲ့သည်။ Top5ကို ချုပ်ရန် 5.17%)။
နံပါတ် ၆ နေရာမှာ စျေးကွက်ဝေစု ၄.၄၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဆွစ်ဇာလန်က ဒေါ်လာ ၆၅.၆၀ သန်း (၃.၇၂%) နဲ့ United Kingdom က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၃.၀၄ သန်း (၂.၂၄ ရာခိုင်နှုန်း) တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉.၄၃ သန်းတန်ဖိုးရှိ ပုလဲများ တင်ပို့ရောင်းချမှုတွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် စျေးကွက်ဝေစု ၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အဆင့် ၉ တွင် ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တင်ပို့မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃ ဒသမ ၄၆ သန်း (၁.၅၉ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထိပ်တန်း ၁၀ စာရင်း) တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
ပုံ 5. ကမ္ဘာ့ပို့ကုန်၏ မျှဝေမှုနှင့် တိုးတက်မှု (%)၊
2008-2012 ကာလအတွင်းတွင် အင်ဒိုနီးရှားသည် တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်း အမြင့်ဆုံး 19.69% နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နောက် 15.62% ရှိသည်။ တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့သည် ထိပ်တန်း ၁၀ နိုင်ငံစာရင်းတွင် ၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၁၀.၅၆ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းများကို တွေ့ကြုံခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသော အခြားပို့ကုန်များဖြစ်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၇ ဒသမ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင်သည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်မှု ၃၈ ဒသမ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိကာ သြစတြေးလျသည် ၃၁ ဒသမ ၀၈ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
သြစတြေးလျမှလွဲ၍ ပုလဲတင်ပို့မှုတွင် ထိပ်တန်းတင်ပို့ရောင်းချသူ ၁၀ ဦးတွင် တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
တိုးတက်မှုနှုန်း 22.09% ဖြင့် United Kingdom 21.47% နှင့် Switzerland 20.86%.
ကမ္ဘာသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပုလဲတင်သွင်းမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၃၃ ဘီလီယံဖိုး သို့မဟုတ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၏ တင်သွင်းမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅၀ ဘီလီယံထက် ၁၁.၆၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းခဲ့သည်။ 2008-2011 ကာလတွင် သွင်းကုန်သည် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ 3.5% ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ပုလဲတင်သွင်းမှုသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၇၁ ဘီလီယံဖြင့် အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၃၀ သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
ပုံ 6. ပုလဲ၊ နတ် သို့မဟုတ် ကိုးကွယ်မှု စသည်တို့ကို ကမ္ဘာမှ တင်သွင်းခြင်း။
2009 ခုနှစ်တွင် ဘီလီယံနာ၊ သွင်းကုန်များသည် US$ 1.40 billion နှင့် 1.50 billion အသီးသီးဖြင့် 2012 ခုနှစ်တွင် US$1.33 သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး 2010 နှင့် 2011 တွင် ပြန်ကောင်းလာကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
တင်သွင်းသူများထဲတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၇၁ ဒသမ ၀၆ သန်းတန်ဖိုးရှိ ပုလဲတင်သွင်းမှုတွင် ကမ္ဘာ့ပုလဲတင်သွင်းမှု စုစုပေါင်း၏ ၂၇ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် စျေးကွက်ဝေစုအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃၃ ဘီလီယံဖိုး တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်သည် စျေးကွက်ဝေစု ၂၃ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တင်သွင်းမှုဖြင့် ဒုတိယ၊ ဟောင်ကောင်သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၁ ဒသမ ၂၁ သန်း (၁၆ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း)၊ သြစတြေးလျဒေါ်လာ ၁၁၄ ဒသမ ၇၉ သန်း (၈ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် ဆွစ်ဇာလန်က အဆင့် ၅ နေရာတွင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ တင်သွင်းမှု US$ 47.99 (3.60%)။
အင်ဒိုနီးရှားသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈,၀၀၀ တန်သော ပုလဲများကိုသာ တင်သွင်းခဲ့ပြီး အဆင့် ၁၀၄ တွင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
စာရေးဆရာ : Hendro Jonathan Sahat
ထုတ်ဝေသူ : အမျိုးသားပို့ကုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန။
Previous post: Өмнөд тэнгисийн сувд Индонез
Next post: दक्षिण सागर मोती इन्डोनेसिया